म त सुवास नेम्वाङ रे – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
कलेज गएको पहिलो दिन मेरै अघि केही केटाहरुले ‘ब्रुस्ली आयो ब्रुस्ली’ भने । गाउँबाट भर्खरै आएकाले ब्रुस्ली चिन्दिनथें । त्यसैमाथि कलेजमा कसैलाई नचिनेकाले झन् कसलाई भनेको के मतलब ? पछि त अरु पनि त्यस्तै भन्न थाले । एउटा साथीले भन्यो, ‘अहिले निकै प्रशिद्ध एक्सन हिरो ब्रुस्लीका अनुहारसँग तेरो अनुहार अलिअलि मिल्छ क्या !’
बहुदल आएको केही वर्ष पछिको कुरा हो । एक दिन सफारी कोट लगाएर बागबजारमा हिड्दै थिएँ, एउटा अपरिचितले नमस्कार ग¥यो । नमस्कार फर्काएर चिनिनँ भनें । उसले भन्यो, ‘ म टियुमा पढ्ने काभ्रेको फलानो क्या त नेताज्यू, अस्ति पार्टी कार्यालयमा भेट भएको थियो नि !’ मैले नेता होइन, भनेर वास्तविक परिचय दिएपछि हेरेकोहे¥यै भयो । उसले मलाई एमाले नेता सुवास नेम्वाङ ठानेछ । केही समय अघिको कुरा हो म प्लेनबाट विराटनगर जाँदै थिए । अलि नजिकै बसिरहेको एउटा मान्छे मलाई हेरेर बेलाबेला मुस्कुराउँथ्यो । प्लेनबाट उत्रिएपछि नमस्कार गर्दै पछि लाग्यो । बोल्न थाल्यो । चिन्नुहुन्छ मलाई ? भनेर सोद्धा ‘किन नचिन्नु’ भन्यो । एउटै भ्यान रिजर्भ गरेर गइयो । अलि पर पुगेपछि ऊ त राजनीतिका कुरा गर्न थाल्यो । मैले सुवास नेम्वाङ ठान्नुभयो कि क्या हो भनेपछ उसले ‘होइन र’ भन्यो । आफ्नो नाम बुलु मुकारुङ भनेपछि ‘ए चिनेकै मान्छे पर्नुभएछ’ भन्दै मुख रातो पा¥यो ।
सातआठ वर्ष पहिलेकै कुरा हो । म बागबजारमा फटाफट हिडिरहेको थिएँ । एक जनालाई पछाडिबाट पिठ्युमा मुड्कीले ड्याम्मै पड्कायो । फनक्क फर्केर हेरेको ऊ त रातोपिरो ! पछि कान समाएर माफी माग्दै भन्यो, ‘मैले मेरो साथी प्रदिप ठानेर यस्तो गरेको ।’ कुरा बुझ्दै जाँदा उसले त मलाई संगीतकार प्रदीप बम्जन भन्ठानेको रहेछ ।